Akụkọ - Gini bu co-extrusion?
Co-extrusion, teknụzụ kachasị ọhụrụ na ọtụtụ osisi mejupụtara, teknụzụ okpu a dị elu bụ nke gbakwunyere na isi, ihe dị elu ya bụ ihe na-enye kọọdụ ọ bụla ihe pụrụ iche na arụmọrụ ka ukwuu. elu agaghị agbasa ma kpoo dị ka ihe ndị ọzọ mejupụtara, ka ọ dị ugbu a, obere ọkụ ọkụ ya pụtara ụkwụ efu ga-ahụ ya n'anya, gbakwunye ike ya dị elu nke UV nwere agba ga-adịgide ruo ọtụtụ afọ.
Co-extrusion ma ọ bụ osisi ejiri rụọ oche bụ bọọdụ WPC nke abụọ. A haziri ha na mkpuchi nke na-ejikọta na isi nke mbadamba n'oge n'ichepụta. Process Usoro co-extrusion gụnyere iji antioxidants, agba, na ndị na-emechi UV maka ịkọwa isi.
Uru nke usoro Lihua co-extrusion
Lihua si co-extruded osisi na-enweta infinitely agbanwe na ezigbo agba imecha, atụnyere naanị na osisi okike, a elu na otutu technology na-enye ohere maka ịrịba agba agakọ, na-enye onye nke kasị mma na-achọ mejupụtara mbadamba.
Dabere na ọtụtụ ụlọ ọrụ mmepụta ihe na ihe ọmụma, anyị enweela ike igboju ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ iche iche dị iche iche nke ndị ahịa site na ịnye Composite Co extrusion decking Ihe ntinye nke ọnụ ahịa a bara uru maka ngwụcha dị mma ha, oke ike na àgwà ndị ọzọ pụrụ iche.
Anyị nwere agba dị iche iche nwere ike ịbụ nhọrọ, Anyị nwere ike ịhazi agba na nha dị iche iche dịka mkpa ndị ahịa si dị .Ọ nwekwara ike ịhọrọ ụdị eserese dị iche iche n'elu.Maka nke kachasị, anyị nwere ike ime bicolor co-extrusion WPC ngwaahịa. Nke a nwere ike inye gị azụmahịa karịa , gị na ndị ahịa gị nwere ike ịnwe nhọrọ karịa na agba, nke ahụ ga-abụ ezigbo ire ere maka gị!
Anọ nzukọ co-extrusion edoghi maka rụpụta, anyị nwere ike ijide n'aka gị anapụta time.Also nwere ike inye ndị ọzọ nhọrọ maka you.We ga-etinye ọkara okokụre ngwaahịa na Specific ọnọdụ, mgbe mgbe ọgwụgwọ okokụre, anyị ga-abịa ndị a mbadamba dị ka gị mkpebi.
Ọ bụrụ na ị nwere mmasị na nke a, ị nwere ike ịga na ụlọ ọrụ anyị. Anyị ga-eji obi ụtọ nabata gị na ụlọ ọrụ anyị.
WPC n'èzí decking, WPC decking n'ala, osisi plastic mejupụtara decking, N'èzí WPC decking, WPC mejupụtara decking, WPC ụlọ,